Alain Ratsimbazafy “Misy tambazotra manodina ireo fanampiana ho an’ny vahoaka”
Manomboka tsy mahazaka ny fihibohana ny vahoaka satria tsy ampy azy ireo ny enti-manana hiatrehana izany, hoy ny depiote voafidy teny amin’ny distrikan’Atsimondrano, Alain Ratsimbazafy.
Te hanaja ny fitsipika izy ireo saingy ny hanina anio tadiaviny anio. Eo no angatahana indrindra ny fitondram-panjakana mba hanao ny mangarahara amin’ny fitantanana ny fanampiana ny vahoaka. Miainga amin’ny fahafantarana hoe ohatrinona marina no natokana ho an’izay sosialim-bahoaka izay. Manao ahoana avy ny fanampiana tokony ho azon’ny isan-tokantrano mba hahafahanay manara-maso azy ety an-toerana, hoy hatrany ity depiote ity, satria anjara asanay solombavambahoaka izany. Somary misy ny fanavakavahana sy fanaovana zanak’ikalahafa raha ny tsikaritra hatreto matoa misy olona marobe tsy misitraka ilay fanampiana. Ilaina ny fanatsarana ny komitin’ny loharano. Aoka hangarahara ny fitsinjarana mba tsy hisian’ny fimenomenomana. Vary milanja 2 taonina no hita anaty tokantrano 1 ny zoma teo. Miampy savony sy menaka. Rehefa natao moa ny fanadihadiana dia ny marainan’io no nanomboka tsy nitsahatra nitatitra vary ny teo anivon’io tokantrano io. Raha ny loharanom-baovao azo dia namidy teny amin’ny fiarahamonina isan-karazany teny tamin’ny vidiny 70.000 ariary ny vary ary 3000 ariary ny menaka. Nahataitra ny manodidina izany ka nahatonga ny fidinana ifotony. Araka ny vaovao heno koa dia misy olona avy any amin’ny kaominin’Ambohijanaka no nakana ny entana. Izany hoe efa misy tambazotra mihitsy manodina ireny fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana ireny ka hanaovana antsoavo amin’ny tomponandraikitra ny amin’ny fanaovana fanadihadiana.